नेकपा फुट्न लागेको हो? गोकुल बाँस्कोटालाई आयो २०५४ को झझल्को - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ६ : १२
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विस २०५४ सालको घटना दोहोरिन लागेको चाल आफूले पाएको पूर्व सञ्चारमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रियपात्र गोकुल बाँस्कोटाले जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट मार्फत बाँस्कोटाले नेकपाभित्रको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको र पार्टी विभाजनसम्मको खतरा रहेको संकेत गरेका छन्।
यसअघि अध्यक्षद्वयबीच हालैका भेटघाटमा पार्टीको अन्तरकलह साम्य हुन लागेको खबर बाहिरिएका थिए।
तर, बाँस्कोटाले कलह उत्कर्षमा पुगेको र पार्टी विभाजनको खतरा औंल्याएका छन्।
बाँस्कोटाले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘२०५४ सालको झझल्को पो आउन थाल्यो त नेकपामा। बरु कोरनाको ओखती फेला पर्ला नेकपा झगडाको ओखती कमसेकम काठमाडौंमा चै नपाइने भो जस्तो छ। बिहान मिलेको कुरा बेलुका भत्काइ दिने कन्ट्रोल कक्ष कहाँ रहेछ।’
प्रधानमन्त्री ओली समूहका मुख्य दुई नेताबाट शुक्रबार आएको यो दोस्रो ट्विट हो।
यसअघि शुक्रबारनै ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले एक ट्विट गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई निशाना बनाएका थिए।
ओली विरुद्धको मोर्चाका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ट नेता माधव नेपाल समूहलाई मिलाउन सक्रिय रहेको भन्दै नारायाणकाजीमाथि रिमालले आक्रोश पोखेका हुन।
नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षलाई लिएर शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डसहित संस्थापनइतरका नेताहरूले काठमाडौंको एक होटलमा सम्पादकहरुसँग सामूहिक भेटघाटको कार्यक्रम राखेको बताइएको छ।
छलफल गर्न भन्दै सम्पादकहरूलाई निम्ता गरिएको थियो। उक्त अनौपचारिक कार्यक्रमका लागि प्रवक्ता श्रेष्ठ मुख्य रुपमा सक्रिय रहेको खबर बालुवाटार पुगेपछि रिमालले ट्विट गरेका हुन।
नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रिमालले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मेन्सन गरेर लेखेका छन्, ‘कमसेकम पार्टी प्रवक्ता पदको लाज त जोगाउनुस् र विधि र पद्धतिको नक्कली गीत गाउँदै नेताहरुलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्ने उत्तोलक नबन्नुहोस्।’
भेलामा ओलीइतर नेताले के बिषयमा सम्पादकहरुसँग छलफल गर्न खोजेका थिए भन्ने बारे प्रष्ट छैन। तर, उक्त कारणवश भेटघाट स्थगित पुग्यो।
ओली पक्षकै अर्का नेता तथा प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि पछिल्लो स्थितीलाई दुःखद भनेका छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सन्चालन गर्न नसकेको तथा एकलौटी काम गरेको भन्दै नेकपाका तिव्र असन्तुष्टी छ। वरिष्ट नेता नेपाल र प्रचण्ड समूहले ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै एकपदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
नेकपाभित्र बहुमत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिँरहँदा ओली पक्षीय नेताहरु भने बचाउनमा उत्रने गरेका छन्।
पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले शुक्रबार गरेको ट्विटले नेकपाको अन्तरकलह छरपस्ट हुन्छ।
बाँस्कोटाले हालको अन्तरकलहको स्थितीलाई २०५४ सालको विभाजनसँग जोडेका छन्। र कलह समाधानका स्थिती नदेखेको उनको टिप्पणी छ।
के भएको थियो २०५४?
पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनको सफलतापछि विस २०४७ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादी पार्टी र सिपी मैनाली नेतृत्वको माले बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नामक पार्टी बनेको थियो। महासचिवमा मदन भण्डारी छानिएका थिए।
वि.स २०५० जेठ ३ गते मदन भण्डारीको निधन भएपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव बनेका थिए।
२०५४ सालमा नेकपा एमाले लोकप्रियताको शिखरमा थियो, तर फुट्यो।
भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिलाई लिएर एमालेभित्र तीव्र मतभेदका कारण एमाले फुटेको थियो। माधवकुमार नेपाल र केपी ओली महाकाली सम्झौताको पक्षमा थिए भने वामदेव गौतम विपक्षमा।
मतभेद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्ततः एमाले २०५४ सालमा पार्टी फुटेको थियो। एमाले फुटेपछि, सहाना प्रधान, सिपी मैनाली, वामदेव गौतम लगायतका नेताले नेकपा माले पार्टी गठन गरेका थिए। तर, वामदेव समूह २०५८ सालमा पुनः एमालेमा मिल्न आयो। सिपी मैनाली भने आएनन्। मैनाली हाल पनि मालेका महासचिव छन्।
दुई फरक विचारधाराको राजनीतिक गरिरहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ०७५ को जेठ ३ मा एकता भई नेकपा बनेको थियो। दुई दल एक भएपनि नेता तथा कार्यकर्ताको मन मिल्न सकेको छैन।